Cabdi Qaybdiid Oo DKMG-ka Ka Codsaday Inaan Fursad La Siinin Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Qaybdiid ayaa ugu horeyntii dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ku ammaanay Dagaalada ay magaalada Muqdisho kaga saadhay kooxda al shabaab taasoo uu sheegey in xilli hore loo baahnaa.
Cabdi Xasan Cawaale ayaa dhinaca kale sheegey in Shabaab ayan ka bixin Magaalada Muqdisho balse ay gashteen Shaati kale waa siduu hadalka u yiriye isla markaana ay haatan qorsheynayaan sidii ay isu abaabuli lahaayeen dibna ay u soo bilaabi lahaayeen dagaaladii ay ka wadeen magaalada Muqdisho.
Gananka ayaa kula taliyay Dawladda ku meel gaarka ah inaan wax fursad ah la siin dhaq dhaqaaqa ashabaab isla markaana la sii wado dagaalada lagula jiro illaa laga xaqiijiyo in gebi ahaanba dalka laga cirib tirey.
Gen Cabdi Qaybdiid oo mar ahaa Wasiir ka tirsanaa Dawladdii Dr Cumar Cabdirashiid ayaa intaa ku daray in haddii dagaalada lagula jiro haatan xaraka shabaab la hakiyo in taasi micnaheedu yahay in fursad loo siiyay inay dib isu soo abaabulanaa isla markaana weeraaradii ay wadeen halkoodii ka sii bilowdaan sidaa darteedna waxa uu ku taliyay in dagaalka aan marnaba laga joojinin.
Cabdi Xasan Cawaale oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa raaciyay in iminka awooddii xarakada shabaab si wey isu dhintay isla markaana ay magaalada muqdisho meelo kooban kaga sugan yihiin sidaa darteedna loo baahan yahay in meelaha yar ee ay kaga sugan yihiin magaalada iaga saaro.
Gen Qaybdiid ayaa iminka waxa uu yahay Siyaasi Soomaaliyeed isagoo muddooyinkii danbana ka qayb qaadanyay dib u heshiisiintii laga dhex waday Labadii Beelood ee diiritu ku dhex martay Koofurta Gobolka Mudug oo uu ka mid ahaa ergadii waan waanta ka dhex wadday beelaha halkaa ku dagaalamay.
Si ksataba Hadalkan ka soo yeerey Gen. Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid ayaa waxa uu imaanayaa xilli magaalada muqdisho ay ka jirto deganaan la’aan iyo dagaalo goos goos ah oo u dhaxeeya Ciidamada Dawladda oo gacan ka helaya kuwa amisom iyo kooxda al Shabaab.